Maamulka oo 28-Guri ku wareejiyay saraakiil iyo Ganacsato Tigree ah+sawirada. | ogaden24
Maamulka oo 28-Guri ku wareejiyay saraakiil iyo Ganacsato Tigree ah+sawirada.
Maamul kusheega Kililka ayaa Guryihii ugu badnaa oo laga dhisay magaalada Jigjiga waxaa uu ku wareejiyay dad kasoo Jeeda Qomiyada Tigreega oo isugu Jira saraakiil dhex oo ciidan iyo Ganacsato.
Guryahan oo laga dhisay xaafada 6-aad ee magaalada Jigjiga Qaybna ka ah tiro Gurya ah oo lagu dhisay Hantida Ummada, ayaa Qorshaha loo dhisay waxaa markii hore lagu sheegay in laga Kiraynayo dadka u shaqeeya maamulka balse waxaa haatan si lahaansha ah loogu wareejiyay saraakiil iyo Ganacsato aan wax baahi ah u Qabin.
Dhulka Guryaha lagu wareejiyay Tigreega laga dhisay ayaa waxaa laga barakiciyay dad danyar ree Jigjiga ah oo lawada Yaqaano, kuwaasi oo haatan daafaha magaalada kadhistay Buulal aan Qabawga dhaxanta ka celin karin ayna haysato duruuf aad u adag.
Guryahan oo sida warka uu nagu soo Gaadhsiiyay wariyaheena magaalada Jigjiga dhacday 18-kii bishan ayaa waxaa Goob Joog ka ahaa xubno katirsan maamul kusheega Kililka oo ay ugu Horayso Ayaan Maxamed oo ku magacaban maareyaha Horumarinta Guryaha ee Kililka.
Saraakiisha Tigreega ah ee lagu wareejiyay Guryaha ayaa ah kuwo dhowaan Tababar loogu soo xidhay xerada Garab case ee magaalada, halka shakhsiyaadka weheliya ee Ganacsatada ahna ay yihiin kuwo kasoo Qaxay dhulka Oromada oo horay ay ugu lahaayeen Guryo iyo Ganacsiyo kala duwan.